Phupha ngeKhamera yoSilingi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Phupha ngekhamera isilingi
I-attic ngokubanzi ibhekisa kwigumbi elingaphantsi kwesilingi eligqunyiweyo nelingafakwanga kakuhle. Ngomxholo we-attic, amagama "amancinci" kunye "amancinci" adityaniswa ngokukhawuleza, ngamanye amaxesha "amnyama" kuxhomekeke ekukhanyeni. Kungenxa yokuba kukho isithuba esilinganiselweyo esifumanekayo phantsi kwendlu yophahla enophahla olusezantsi. Imeko yahlukile kwigumbi elihlaziyiweyo phantsi kophahla.
Ukuba uphawu lwe-attic ngoku luyavela ephupheni, umxholo wephupha kufuneka uqwalaselwe nokutolikwa. Iimvakalelo ezinxulumene negumbi lokulala kwigumbi eliphezulu zinokubonelela ngemikhondo engakumbi. Ngaba uphahla lwaluncinci kwaye lumxinwa? Ngaba uzive ukhululekile kuyo okanye endaweni yoko ubiyile? Iimpendulo zale mibuzo zinokuba luncedo ekutolikeni.
1 Uphawu lwephupha «uphahla» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uphahla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Attic» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uphahla» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso wephupha lamanqaku ophahla ngokutolikwa ngokubanzi kwephupha. amathemba angenakuzaliseka nokunqwenela amaphupha. Iphupha lakho kufuneka likwazise ukuba iminqweno yakho ayizukufezekiswa el mundo ukuvuka. Ngokukodwa ukuba uphupha ephahleni, le nkcazo kufuneka isetyenziswe.
Igumbi elincinane nelincinci elimnyama ephupheni linokuba ngu Ukuphazamiseka emzimbeni okanye ubonise ukungoneliseki. Umphuphi uziva eveze ezi mvakalelo ebomini bokuvuka kwaye akaqinisekanga ukuba uza kujongana njani nazo. Ke ngoko, lo mfanekiso wamaphupha uqulethe nesicelo sokuphanda unobangela wokungonwabi kunye nokuphelisa ukuba kukho imfuneko.
Ukuba uphupha ukulala kwigumbi eliphezulu, kufuneka uzilungiselele ukusilela. Kuba ngekhe ubenethamsanqa emsebenzini wakho wangoku.
Uphawu lwephupha «uphahla» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu "lwe-attic" oluyiphupha luyimfihlo i-nostalgia yomntu olalayo emva kobomi kwilizwe lakhe elinomda. Kubomi bokwenyani, uziva engenamandla ngokuchasene nothungelwano lwehlabathi lanamhlanje. Kungenxa yoko le nto efuna ukuzimela. Kuba kungoko kuphela apho uya kubuyela kwimeko yoxolo lwangaphakathi.
Ukuba iphupha liziva litshixiwe ephupheni lakho kwigumbi elinyinyitheleyo, iphupha eli liguqulwa ngokuchaseneyo. Oku kuthetha ukuba olu phawu lukhuthaza ukuba wandise ulwazi lwakho kunye nehorizons. Ngale nto Ulwazi luyanda Ngaba uya kukwazi ukushiya ubomi bakhe obumxinwa ngasemva?
Kwiimeko ezinqabileyo, igumbi elincinci le-attic njengomqondiso wephupha linokubonisa ubunzima bonxibelelwano. Lowo uleleyo akakwazi ukuzibonakalisa ekuvukeni ubomi ngendlela ebengathanda ngayo.
Uphawu lwephupha «Attic» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba eligqithisileyo lohlalutyo lwamaphupha, uphawu "iAttic" lusetyenziswa njengesiboniso sokulangazelela komphuphi. ukusikelwa umda ngokomoya ijongiwe. Kungenxa yokuba oku kunika umntu oleleyo uluvo lokhuseleko ebomini bakhe.